March 2019 - Page 4 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
March 11, 2019 Puntland Mirror 0
Kampala-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Uganada Yoweri Museveni ayaa ku goodiyay in uu ciidamadiisa kala baxayo Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) haddii Qaramada Midoobay ay ku adkeysato in la dhimo ciidamada ku jira howlgalka. Goodinta […]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Isniin ah safar ku tagay magaalada Kismaayo. Khayre ayaa waxaa soo dhaweeyay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Bilihii dhawaa ee lasoo dhaafay, waxaa jiray muran […]
Somali PM Khaire in Kismayo to restore relations with Jubaland state
Kismayo-(Puntland Mirror) Somalia’s Prime Minister Hassan Ali Khair has arrived in Kismayo on Monday. Khaire was welcomed by Jubaland President Ahmed Mohamed Islam. In the last few months, there was a strong strain between the […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) lix qof oo Soomaali ah ayaa la xaqiijiyay in ay kamid ahaayeen dadkii ku geeriyooday burburkii diyaaradda Ethiopian Airlines. Dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda oo tiradoodu ahayd 157 qof ayaa ku dhintay burburka, sida […]
Ma jirto cid ka badbaaday burburka diyaarada Ethiopian Airlines
March 10, 2019 Puntland Mirror 0
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Diyaarad rakaab oo ay lahayd shirkada Ethiopian Airlines ayaa burburtay, waxaana ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa oo dhan 157 qof. Rakaabka ayaa ka soo jeeday 33 dal oo ay kamidyihiin Kenya, Itoobiya, […]
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Diyaarad ay leedahay shirkada Ethiopian Airlines ayaa burburtay iyada oo ku sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Diyaradda ayaa ku burburtay meel u dhow magaalada Bishoftu, oo 62 kiilomitir dhanka koonfur-bari […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamo ka socda maamulka Somaliland ayaa soo gaaray deegaano kuyaala gobolka Sanaag labadii maalmood ee u dambeysay, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan dadka deegaanka. Ujeedada ciidamada ayaa ah in ay ka hortagaan jabhadda […]
March 8, 2019 Abdi Omar Bile 0
Washington-(Puntland Mirror) Ciidan dhimista qorsheysan ee qaarada Afrika saameyn kuma yeelan doonto howlgalada argagixiso la dirirka Soomaaliya, halkaasoo Mareykanku ay ka fuliyaan duqeymo ka dhan ah Al-Shabaab, sida uu Aqalka Congress-ka u sheegay taliyaha Taliska […]
March 8, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Nin hubeysan oo aan la garanayn ayaa Suldaan Bashiir Muuse Koonte ku dhex dilay masjid kuyaala magaalada Boosaaso maanta oo Jimce ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka katirsan. Suldaanka ayaa salaada Jimcadda […]
Dubai-(Puntland Mirror) Wasiirkii Arrimaha Dastuurka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa maanta oo Jimce ah ku geeriyooday isbitaal kuyaala magaalada Dubai ee dalka Imaaraatka Carabta, sida ay xaqiijiyeen xubno katirsan qoyskiisa. Wasiirka ayaa […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Arbaco ah u safray dalka Turkiga oo uu casumaad ka helay. Khayre ayaa kulan la yeelan doona masuuliyiinta Turkiga inta uu joogo halkaas. Safarka Raysulwasaaraha [...]